Torolàlana azo ampiharina amin'ny coronavirus fanarenana Post C-19
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Torolàlana azo ampiharina amin'ny coronavirus fanarenana Post C-19
Torolàlana azo ampiharina amin'ny fanarenana Post C-19
Araka ny tolona indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany miaraka amin'ny mitohy Krizy C-19, miaraka amin'ireo orinasa fandraisam-bahiny sy orinasam-pizahan-tany mihidy ary voaroaka ny ekipa, miharatsy ny indostria Ireo tompona orinasa dia mitady tari-dàlana ary mila torolàlana amin'ny famerenana amin'ny laoniny.
Miantso vonjy izy ireo. Ny indostria dia mila mifantoka haingana sy mifampiresaka amin'ny maha-matihanina izay azon'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany raha vao manomboka ny fanarenana.
Mangetaheta fitarihana izy ireo ary amin'ny tranga sasany dia misy ny hanoanana ao amin'ny fianakaviany rehefa voaroaka ny mpiasan'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany.
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany (UNWTO) dia nanome tolo-kevitra vitsivitsy nangataka fanampiana maika ny governemanta. Ireo tolo-kevitra ireo dia voalohany avy amin'ny Komitin'ny krizy momba ny fizahantany eran-tany, natsangan'ny UNWTO miaraka amin'ireo solontena avo lenta.
Miantso ny tsirairay ny tolo-kevitr'izy ireo hiomana amin'ny famerenana amin'ny laoniny mba hiverenana matanjaka sy maharitra.
Ny tolo-kevitra momba ny asa no andiam-panatontosana voalohany azo raisin'ny governemanta sy ny sehatra tsy miankina ankehitriny sy amin'ireo volana manahirana ho avy.
Mba hahomby indrindra dia tokony ho «… mailaka, tsy miovaova, miray saina sy be laza ny valintenintsika, hoy izy ireo.
Fa ahoana ny fomba fiasan'ny tsirairay ho amin'ny fanarenana?
Araky ny voalazan'ny ohabolana taloha dia mbola tsy maika loatra ny fiomanana. Ny drafitra fifandonana dia hevitra tsara. Topazo maso ireo ambaratongan'ny fahasahiranana eo amin'ny orinasa. Anontanio hoe "Ahoana raha…." fanontaniana. Manomboka amin'ny tranga ratsy indrindra aloha dia miverina miverina.
Rehefa mandroso ny drafitra iray, mifantoha amin'ny fotoana maharitra ary diniho ny fiantraikan'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, ny fahafaham-pon'ny mpiasa, ary ny endrika maharitra amin'ny marika. Ny fahaverezan'ny fahitana ny fotoana maharitra, dia mety hiafara amin'ny fanakorontanana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa sy ny mpiasa ary manimba ny tombom-barotra sy ny fahaizany miaina.
Milamina sy mifantoha. Mitadiava vahaolana. Aza ampitahanao ny vanim-potoana midina amin'ny vanim-potoana tsara taloha. Mieritrereta bebe kokoa amin'ny fanapahan-kevitra maharitra.
Ny fihenam-bidy dia mora fa mety tsy ny valiny.
Manandrama manangona tombony ho fonosana. Manampia sanda fa tsy fihenam-bidy. Imbetsaka ny orinasa no mahatsapa ny faharetan'ny taona maro vao tafarina amin'ny fihenam-bidy notanterahin'izy ireo nandritra ny fihenan'ny toe-karena.
Raha tsy maintsy atolotra ny fihenam-bidy, ataovy amin'ny fomba marani-tsaina, fa aza mandany vola be amin'ny orinasa. Eritrereto izay tadiavin'ny mpanjifa. Mifantoha amin'ny fonosana tsy manam-paharoa - any amin'ny trano fandraisam-bahiny, ohatra, dia afaka manolotra alina fanampiny maimaimpoana ny tsirairay, koa manandrama mamolavola fonosana manokana.
Tazomy ny teti-bola amin'ny marketing
Tazomy ireo mpanjifa amin'izao fotoana izao ary mivoaha fonosana sy fampiroboroboana izay manintona ny orinasam-barotra ankehitriny sy vaovao. Tsy azo atao izany raha voatazona ny teti-bolan'ny marketing. Jereo any ivelan'ny faravodilanitra. Mikaroha fizarana tsena kely sy tsy dia misy vidiny ary mampivoatra renirano fidiram-bola vaovao ho an'ny sakafo sy zava-pisotro, menio alaina, mpivaro-mofo, kafe amin'ny Internet. Jereo ny klioban'ny fahasalamana sy ny spa raha mila fanamorana bebe kokoa.
Ataovy azo antoka ny fanamafisana amin'ireo ekipa amin'ny fomba hanatsarana ny fanovana fidiram-bola avy amin'ny fidiram-bola rehetra, na lehibe izany na kely, izay hanampy amin'ny fanatsarana ny faran'ny farany.
Tazomy ny haavon'ny serivisy
Raha tsy maintsy hesorina ny vidiny dia ataovy izany amin'ny sehatry ny orinasa izay tsy misy akony mivantana amin'ny mpanjifa. Raha misy fiatraikany ratsy amin'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa sy ny kalitaon'ny serivisy dia ho sarotra kokoa ny mitazona ny mpanjifa ankehitriny ary manintona mpanjifa vaovao aorian'ny C-19.
Angony ny faharanitan-tsaina. Fantaro ny sahan'ny krizy
Makà fotoana kely hanangonana ny vaovao rehetra ary hahitanao tsara izay tena zava-mitranga. Ny fanombanana ny toe-javatra dia hamaritra ny fizotran'ny hetsika, ka mitandrema.
Miresaka amin'ny mpandray anjara rehetra; mitady ny fahaizany sy ny heviny; ampahafantaro azy ireo fa raisina am-pitandremana ny olana. Fotoana hanaporofoana ny mpitondra izao. Meteza ho mpitondra.
Ny mpitondra tsara dia miresaka mazava sy matetika
Amin'ny krizy, ny tsy fahampian'ny fampahalalana dia matetika no heverina ho ratsy. Tsy fotoana tokony antenaina hanjavona fotsiny ny krizy C-19. Efa fantatra fa ho lava sy lalina ny fiatraikany. Valio ny fanontaniana ary omeo vaovao. Ampitao am-pitokisana sy mazava tsara ny drafitra sy ny paikady ho avy - ny hafatra izay ampitaina matetika sy tsy tapaka fa hamaky izany fa azo antoka fa tohanan'ny hetsika hentitra io. Izao indray, tonga amin'ny fotoana fitarihana. Amin'ny fahazoana ny toe-javatra, ny ekipa mandrisika, ary ny fampihetsehana ny paikady mazava, dia azo hamaivanina ny aretim-po, ny fiheverana ratsy, ary ny fiatraikany eo amin'ny farany ambany.
Ny ho avy dia manana fe-potoana ara-barotra maro hodinihina, eo no ho eo (izao) sy ireo amin'ny ho avy.
Ny drafi-pandraharahana sy ara-barotra rehetra amin'ity vanim-potoana C-19 ity dia foana sy lany andro. Inona koa no ilain'ny tompona orinasa apetraka haingana rehefa manomboka mihodina indray ny kodiaran'ny indostria?
Mametraha fanontaniana betsaka…
Inona no hatao mba hiarovana ny trosa sy ny fahasimban'ny orinasa?
Inona avy ny fanampiana ara-bola any ho an'ny tompona orinasa sy ny fomba fangatahana fanampiana?
Inona no fanampiana ananan'ny mpiasa sy ny mpiasa taloha? Ohatra, ny volam-panjakana, ohatra, any Thailand, ny fomba hanampiana ny ekipa hangataka famatsiam-bola ho an'ny fiarovana ara-tsosialy (SSF)?
Aiza no handeha hitady orinasa?
Mandraisa anjara amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny sehatra indostrialy hiomanana amin'ny famerenana amin'ny laoniny - fandraisana andraikitra izay mitaky hetsika sy fitarihana bebe kokoa. Raha olana ny fitsangatsanganana dia diniho ny fihaonamben-dahatsary, tranonkala web, ary ireo safidy hafa azo alefa “tia namana”.
Mijanona eo amin'ny sehatra virtoaly ny dia. Fa hiverina izany.